Nipoaka ny Galaxy Note7 bebe kokoa, Samsung manemotra ny fizarana ny terminal | Androidsis
Ny fanelezana ny Galaxy Note 7 dia nihemotra araka ny nambaran'i Samsung satria be ny fipoahana
Hatramin'ny fotoana namoronana finday avo lenta mandra-pahatongany eo am-pelatanantsika dia manana dia lavitra izy izay matetika andalovany handraisana karazana fitsapana rehetra ary ho tonga amin'ilay fanjakana antenaintsika. Saingy tsy mandeha tsara ny zava-drehetra, toy ny nitranga tamin'ny terminal hafa ary toy ny mahazo an'i Samsung miaraka amin'ny Galaxy Note7, iray amin'ireo fitaovana andrasana indrindra ny taona.
Raha ny hetsika tokana dia mety ho lasa maningana izay mahafeno ny lalàna, izay efa nitranga in-dimy sy izay Note 7 no nipoaka, Zavatra tsy kisendrasendra izany. Noho io antony io indrindra no nahatonga ny Samsung hanamafy ny fahatarana amin'ny fizarana ny Galaxy Note 7. Niresaka tamin'ny Reuters ny orinasa fa izany dia vokatry ny fitsapana fanampiny izay atao mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra ...
Tsy fantatra hoe aiza amin'ny faritra aiza no hisy an'io manemotra ny fahatongavan'ilay naoty 7, izay amin'ny tenany ihany dia vaovao ratsy ho an'ity mpanamboatra ity izay nanana taona maro. Inona no tsy maintsy nanahirana mafy an'i Samsung mba hivoaka hanambara fa tara ny fizarana an'ity finday avo lenta ity.
Vao tamin'ity volana ity, tompona Galaxy Note 7 nanandrana tamin'ny nofony ihany rehefa nipoaka ny telefaona rehefa nameno. Zavatra tena matotra satria mety hanimba olona iray izany, noho izany Samsung dia nanemotra ny fizarana noho ny antony lehibe indrindra hahalalana ny antony ao ambadik'ireo fipoahana ireo.
Tsy maintsy hiandry ny sasany isika izao fanambarana ofisialin'ny mpanamboatra Koreana hahafantarana ny fotoana hamerenany ny fizarana an'ity farany vaovao ity, telefaona izay tsy nitsahatra niresaka momba ny zava-tsoa ao aminy isika, fa kosa mipoaka rehefa voampanga.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny fanelezana ny Galaxy Note 7 dia nihemotra araka ny nambaran'i Samsung satria be ny fipoahana
Johnny 5 dia hoy izy:
Hihombo io terminal io!
Valiny tamin'i Johnny 5
Toy ny: =)
Corning dia manambara ny farany Gorilla Glass SR + ho an'ny akanjo azo ampiasaina